Diniho ity ohatra ity. Tsara be foana ny naotin’i Rachel taloha. Rehefa nifindra kilasy anefa izy, dia nomen’ny mpampianatra azy naoty ratsy be foana. Hoy i Rachel: “Fanahy iniany mihitsy ilay izy.” Nasehon’ilay mpampianatra tamin’i Rachel sy ny mamany fa tsy tiany ny fivavahan’izy ireo.
Inona no nitranga avy eo? Hoy i Rachel: “Nandeha niresaka taminy izahay sy mamanay isaky ny hitanay hoe tokony hahazo naoty tsara aho, nefa mbola nomeny naoty ratsy be ihany. Tsy sahy intsony izy tamin’ny farany.”
Tadidio fa tsy voatery hivaha foana ny olana. Tsy maintsy miaritra ianao indraindray. (Romanina 12:17, 18) Hoy i Tanya: “Efa sendra mpampianatra ratsy toetra be aho. Tia manambanimbany ankizy izy. Nolazainy hoe vendrana izahay. Efa voany aho dia nitomany be, fa avy eo aho niezaka tsy hivaky loha. Ny fianarako no nataoko tsara. Tsy dia naninona ahy intsony izy, sady mba nomeny naoty tsara aho, nefa betsaka ny ankizy nahazo naoty ratsy. Voaroaka izy, roa taona tatỳ aoriana.”